Abenzi base China abasebenza ngaphandle kwamatye abenzi base China kunye nabathengisi | ULihua
Ubunini beMveliso:WPC khazi
Ixabiso:Iidola ezi-3.84 / M.
Umbala:Chocolate, Ngwevu, Red Brown, Brown okanye wena
Co-extrusion WPC khazi
Ipuli yokudada, igadi yangaphandle
● Iphaneli yodonga edityanisiweyo kaLihua ifezekisa umbala ogqityiweyo ongagungqiyo kunye nothembekileyo, ngokuthelekisa kuphela kwimithi yendalo, obu buchwephesha buqhubele phambili kunye nobuchule buvumela ukudityaniswa kombala okumangalisayo, ukubonelela ngolunye lweyona khonkrithi intle ikhangeleka ngathi!
Nokuba yeyiphi na imibala eqhelekileyo okanye umbala wokuxuba, singenza isigqibo sakho.Ukuba umbala othile okhethekileyo wokufakwa kodonga, nceda usithumelele iisampulu zakho.
EN 15534-5: 2014 Icandelo 4.5.1 Akukho namnye kwimizekelo oya kubonisa ukungaphumeleli Akukho qhekezo lweemodeli zovavanyo
EN 15534-5: 2014 Icandelo 4.5.2 Ukuphambuka phantsi komthwalo we-500N -5.0mmUkugoba amandla
Ubuninzi umthwalo ekuqhekekeni Ubuso bangaphambili: Ubuninzi bomthwalo: Kuthetha ngo-1906N
Ukuphambuka kwi-250N: Kuthetha i-0.64mm ubuso obuBuyayo:
Ukudumba okuphezulu: ≤12% ubukhulu, ≤2% ububanzi, .21.2% ubude
EN 15534-5: 2014 Icandelo 4.5.6 Nyanzela ukusilela: 479N,
Ixabiso elithethiweyo: 479N,
Egqithileyo Eco-friendly Wood edityanisiweyo Co-extrusion WPC Decking
I-Q1: Loluphi uhlobo lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q2: Loluphi uhlobo lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q3: Ngabaphi abathengi obapasileyo uhlolo lomzi-mveliso?
I-Q4: Injani inkqubo yakho yokuthenga?
Q5: Uthini umgangatho wabanikezeli benkampani yakho?
I-Q6: Umsebenzi wakho wokubumba uhlala uqhele kangakanani? Ungayigcina njani imihla ngemihla? Yintoni amandla eseti nganye yokufa?
Q7: Yintoni inkqubo yakho yemveliso?
Q8: Lixesha elingakanani eliqhelekileyo lokuhanjiswa kweemveliso zakho?
I-Q9: Ngaba unayo ubuncinci be-odolo yobungakanani? Ukuba kunjalo, buthi ubuncinci bobungakanani beodolo?
I-Q10: Uthini umthamo wakho uwonke?
Ukudityaniswa kwe khowudi kwe-WPC
Manzi Co-extrusion WPC Wall khazi
Iphaneli yeWPC yeWall yangaphandle
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC nokwadala, WPC decking edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking umgangatho,